CBD ude BY TRYTRANQUIL.NET | Ude kacha mma 2022 maka mgbu
CBD ude sitere na TRYTRANQUIL.NET
Click ebea ịtụ site na webụsaịtị ibe anyị redmperorcbd.com
Enwere ọtụtụ ụzọ iji (CBD) cannabidiol. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka mgbu maka nkwonkwo, mọzụlụ, ma ọ bụ ọnọdụ akpụkpọ gị, ude CBD dị n'elu nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma.
Ude CBD bụ ude, ude ma ọ bụ ihe ọ bụla etinyere na CBD. Enwere ike itinye ha ozugbo na akpụkpọ ahụ.
N'agbanyeghị na nyocha banyere ude CBD ka nọ na mmalite ya, anyị maara ọtụtụ ihe gbasara ya.
Nnyocha Isi mmalite ntụkwasị obi na ụmụ oke chọpụtara na ude CBD nke CBD nwere ike inye aka ịchịkwa oke mgbu na mbufụt, nke nwere ike ibute ọrịa ogbu na nkwonkwo.
The American Academy nke Dermatology tụkwara aro na enwere ike iji isiokwu otu ngwaahịa CBD dị ka ihe mgbakwunye maka eczema na psoriasis na nzukọ kwa afọ ha na 2018.
Ihe ndị a nwere ike imetụta arụmọrụ CBD.
Ogo nke CBD Cream
Usoro onunu ogwu nke CBD ude
Ihe mejupụtara ude CBD
Ude CBD Maka Enyemaka Mgbu
The endocannabinoid (ECS) Sistemụ akara ekwentị bụ sistemụ mmadụ nwere.
Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo na CBD na-emekọrịta ihe na isi ihe ECS, endocannabinoid (ma ọ bụ ụbụrụ) onye na-anabata ya.
Obere protein a na-akpọ ndị na-anabata ya na-etinye aka na sel. Selụ ndị a na-ahụ maka ịnata akara na-abụkarị kemịkalụ ma kesaa ha n'ime ahụ gị.
Mmeghachi omume ndị a na-emepụta ihe na-ebelata mgbu, mmetụta mgbochi mkpali na-enyere aka na njikwa mgbu ahụ gị. Ngwaahịa CBD na ngwaahịa CBD nwere ike ịbara ndị mmadụ na-enwe oke mgbu na-adịghị ala ala dị ka mgbu azụ.
1 2018 Review gosipụtara otú CBD nwere ike isi jiri ya na mgbu na-adịghị ala ala. Ọmụmụ ihe a nyochara nnwale ndị emere n'etiti 1975-March 2018. Ihe ọmụmụ gụnyere:
CBD Cream maka enyemaka mgbu ogbu na nkwonkwo
A 2016 ọmụmụ site Source enyochala ojiji CBD n'ime ụmụ oke nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo.
Ruo ụbọchị anọ, ndị ọkà mmụta sayensị tinyere ude CBD na òké. Kwa ụbọchị, a na-enye òké ndị ahụ ma ọ bụ 3.1, 0.6, 6.2, 62.3, ma ọ bụ 62.3 mg nke CBD ude. Ndị ọkà mmụta sayensị hụrụ mbelata nke mbufụt na n'ozuzu mgbu na nkwonkwo òké. Enweghị mmetụta ọ bụla ozugbo nyocha ahụ gasịrị.
Obere doses nke 3.1 mg ma ọ bụ 0.6 mg egosighi mmụba ọ bụla na akara mgbu. Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na 6.2 mg / ụbọchị zuru ezu iji belata ọzịza òké.
Oke ndị natara 62.3 mg kwa ụbọchị gosipụtara nsonaazụ yiri nke ahụ na ndị enyere 6.2 mg / ụbọchị. Ha enwetaghị ọnụ ụzọ dị ala maka mgbu site n'inweta ọgwụ dị elu nke ukwuu.
Ude CBD nwere ike belata ihe mgbu ma belata mbufụt na ndị na-arịa ọrịa ogbu na nkwonkwo. Achọkwuru nyocha mmadụ.
(35) Ihe ị kwesịrị ịma tupu iji ngwaahịa enyemaka mgbu CBD na-enweghị ndenye ọgwụ l GMA YouTube
Ozi ndị ọzọ na ude cbd maka mgbu site na trytranquil.net
Ude mgbu CBD bụ ọgwụgwọ sitere n'okike maka nkwonkwo na akwara mgbu. Ndị mmadụ na-eji ngwaahịa a aṅụ iyi ma nwalee ọgwụgwọ ọ bụla ọzọ. Enwere ike itinye ude CBD n'akụkụ ọ bụla nke ahụ, ma ọ bụ naanị n'akụkụ ụfọdụ. Enwere ọtụtụ ụdị dị na ike dị iche iche. Ọ bụ ezie na ọdịnaya CBD nke ngwaahịa ndị a dị iche, ọtụtụ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Enwere ike iji ude ahụ gwọọ mgbu metụtara nkwonkwo na mgbu ahụ.
Ude mgbu nke Trytranquil CBD bụ nke a kacha mara amara. O nwere 400mg nke CBD soluble mmiri, yana ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ahịhịa, iji belata ihe mgbu metụtara mbufụt, sprains na ogbu na nkwonkwo. Ọ dị mma ma ụmụaka ma ndị okenye itinye aka na mpaghara ndị ahụ metụtara ugboro 3-4 kwa ụbọchị. Tupu itinye ude ahụ n'ahụ gị, kpọtụrụ dọkịta.
Tinye ude mgbu CBD ozugbo na mpaghara ahụ. Ị kwesịrị itinye ude ahụ na mpaghara dum. Ehichala ya. Ọ nwere ike were ebe ọ bụla site na nkeji 10 ruo awa 2 maka mmetụta ahụ ka ọ banye. Kwe ka oge zuru ezu maka mmetụta ahụ ka ọ rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ikwugharị ngwa ahụ ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị. Tupu iji ngwaahịa a na ụmụaka, ọ dị mkpa ịkpọtụrụ dọkịta.
Ude mgbu CBD na-abịa n'ụdị 100mg ruo 3,000mg kwa ite. Ị nwere ike ịnwale itinye uche CBD dị iche iche iji chọta nke kacha mma maka mkpa gị. Ụfọdụ ndị mmadụ chọrọ itinye uche CBD kachasị elu maka enyemaka. Ndị ọzọ na-akọ ụdị enyemaka ahụ site na ngwaahịa 100mg. Ya mere, ị ga-anwale ite dị iche iche ruo mgbe ịchọtara nke ziri ezi. Ị nwere ike ịnwale ụdị dị iche iche na dosages ruo mgbe otu na-arụ ọrụ maka gị.
Ihe niile sitere n'okike bụ ụzọ kachasị mma isi mee ude ihe mgbu CBD dị mma. Ọ bụghị GMO na enweghị obi ọjọọ. A na-eme ya nke hemp na-adịgide adịgide. Ude mgbu CBD na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka mmiri mmiri ndị ọzọ. Mgbe ị na-ahọrọ ude CBD, ọ dị mkpa iburu n'uche itinye uche. Agbanyeghị, ọ ka ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwaahịa a mgbe niile. Enwere ike iji ya na ahụ na ihu gị.
Redem Emperorcbd.com na-emekwa ngwaahịa CBD n'elu. Redemperorcbd.com bụ onye ndu n'ime ụlọ ọrụ hemp. Enyere ụlọ ọrụ ahụ ihe nrite PM360 Trailblazer Award 2020 maka ngwaahịa kacha mma na ihe onyinye GDUSA American Packaging Design Award. Di na nwunye a bụ ezigbo ihe atụ nke ụlọ ọrụ na-eji CBD dozie nsogbu kwa ụbọchị. Redemperorcbd.com bụ ika na-enye CBD Pain Creams. Ngwaahịa a na-amasị ma ndị na-ahụ maka ahụike yana ndị na-adịghị ahụ ike.
Enwere ike zụta ude mgbu CBD n'ụlọ ahịa ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ahịa ahụike. Enwere ike zụta ya n'ịntanetị ma ọ bụ n'ụlọ ahịa na-ere ahịa nke mpaghara gị. Gbaa mbọ hụ na esighị na wii wii mee ngwaahịa a. Ị ga-agụ akara mgbe niile ma ọ bụrụ na ị maghị. Ọ bụ iwu na-akwadoghị ikwu na ngwaahịa ahụ nwere hemp. Ụdị dị mma ga-enwe asambodo iwu na enweghị mmetụta ọ bụla. Ọ nweghị kemịkalụ na-emerụ ahụ na mgbakwunye ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị nwere akpụkpọ ahụ.
A na-eji ude mgbu CBD belata mgbu. O nwere CBD ụdịdị dị iche iche toro n'ụzọ anụ ahụ yana ngwakọta nke terpenes osisi, ihe ọkụkụ na ihe ndị ọzọ. Ihe bụ isi ihe nke CBD Pain Cream bụ iarnica. Ọ nwere ihe mgbochi mkpali na menthol na-enyere aka na usoro jụrụ oyi. Ude a nwekwara vitamin E na mmanụ aki oyibo dị ka ihe ndị sitere n'okike. Ngwaahịa a nwere ike inye enyemaka mgbu ruo awa 24.